Telo amin'ireo morontsiraka mahafinaritra indrindra eto an-tany | Vaovao momba ny dia
Telo amin'ireo morontsiraka tsara tarehy indrindra eto an-tany
Ranomasina sy ranomasina | | tora-pasika
Miresaka momba ny morontsiraka sy ny ranomasina ao anaty lahatsoratra iray ary lazao izay mendrika ny hatsaran-tarehy Toy ny mandeha amin'ny lavenona mbola may. Lahatsoratra voafaritra tanteraka izy io ary mety tsy ny mpamaky rehetra no mankafy azy, indrindra ireo morontsiraka izay mankafy ny torapasika misy ny tanànany mandritra ny taona, satria ho azy ireo no tsara indrindra. Fa azo antoka fa ianareo rehetra mamaky anay dia hanaiky anay fa ireto morontsiraka dimy asehonay anao ireto dia tsara tarehy kokoa ary mendrika toerana amin'ity lisitr'ity 'top 3' ny morontsiraka eto amin'izao tontolo izao.
1 Bahía Concha (Tayrona Park. Santa Marta, Kolombia)
2 Nosy ny Fanahy Masina (Mexico)
3 Etretat (Normandy, Frantsa)
Concha Bay (Tayrona Park. Santa Marta, Kolombia)
Amin'ity morontsiraka ity dia tsy hanana ny toe-javatra sarotra indraindray ianao raha misafidy Tora-pasika na tendrombohitra. Izy io no tonga lafatra ho an'ireo mankafy ny lafika roa.
Izy io dia morontsiraka tena hafa be amin'ireo izay efa hitantsika taloha: manana fasika fotsy be izy, vato lehibe sy saika boribory ary zavamaniry betsaka, miaraka amin'ny toerana iray izy rehetra.
Izy io dia morontsiraka tonga lafatra mba hiala tanteraka amin'ny zavatra rehetra, miala sasatra, vonoy ny findainao ary miala sasatra tsotra izao. Ny hatsaran-tarehin'ity morontsiraka tsy mahazatra ity dia hanaitra ny sainao.
Nosy ny Fanahy Masina (Mexico)
Ity nosy ity dia manana hatsarana hafakely ary lavitra ny canons amoron-dranomasina izay fantatsika matetika. Any amin'ny farany avaratry ny Bay of Peace ary misy 99 kilometatra toradroa.
Ankoatry ny fananany rano mangarahara dia voahodidin'ny famolavolana vatolampy izay ahitantsika azy avy liona an-dranomasina ny IREOTOMBO-KASE.
Etretat (Normandy, Frantsa)
T amoron-dranomasina amin'ny Ranomasimbe Atlantika izay mahavariana ny olona rehetra mitsidika azy, ao anatin'izany ilay mpanao hosodoko Claude Monet, izay namelombelona azy tamin'ny diloilo tamin'ny sary hosodoko malaza mihoatra ny iray.
Izy io dia morontsiraka angano: be vato, miaraka amin'ny verdigris tena mampiavaka ny faritra mando ary miaraka amin'ny fasika vatokely.
Tsy afaka tsy hahita an'ity torapasika mahafinaritra ity ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Telo amin'ireo morontsiraka tsara tarehy indrindra eto an-tany
Stiniva, morontsiraka mitokana any Kroasia
Ny famantaranandro Peacock any Saint Petersburg